သင့်ကွန်ပျူတာကိုထိရောက်စွာနှင့်အခြားသိကောင်းစရာများကိုအသုံးပြုပါ - Brain On Brain
သင့်ရဲ့ Computer ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုပါနှင့်အခြားသိကောင်းစရာများ
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုကူညီရာတွင်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအဓိကနည်းဗျူဟာအနေဖြင့်ထိရောက်စွာအသုံးပြုပါ။ ဤစာမျက်နှာတွင်အောင်မြင်သော rebooters များစွာမှအကြံပေးချက်များရှိပါသည်။
ဝိုင်ဖိုင်ပိတ်ပါ ထိုအခါသင်သည်သင်၏အိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်ခြင်းနှင့်စက္ကူရေးသားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင်တစ်ယောက်ယောက်ဆီကို file တစ်ခုပို့ဖို့ဒါမှမဟုတ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုပို့ဖို့လိုရင် hub ကိုသွားပြီး ethernet cable ကိုချိတ်လိုက်ပါ။ သငျသညျ cat5 umbilical ကြိုးချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှသာပိုက်ကွန်ကိုသုံးပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာမနေတာဟာသင့်ကိုပိုပြီးသတိထားမိစေတယ်။
ဒီနေ့ငါကစမတ်ကျတယ်။ ၁) ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်သိပ်မသုံးခဲ့ဘူး။ ထူးဆန်းပုံရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးတယ်။
သင့်ကွန်ပျူတာကိုထိထိရောက်ရောက်သုံးရန် rebooters အတွက်နောက်ထပ်အကြံပြုချက် -
ငါဂျာနယ်တစ်စောင်ကို Word စာရွက်စာတမ်းထဲမှာသိမ်းထားပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာအပတ်တိုင်းဆယ်ရက်လောက် post လုပ်ချင်တယ်။ သငျသညျနေ့စဉျ reboot အာရုံစိုက်ရပ်တန့်တဲ့အခါမှာသူကတာရှည်ကြာမထင်ထားဘူး။ ကွန်ပျူတာနှင့်အချိန်ကြာကြာနေလျှင် - သွေးဆောင်မှုကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီသည်။
သင်ကိုယ်တိုင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင်လုပ်နေသည့်အကြား၌သာရှာဖွေနေသည်၊ သို့မဟုတ်သင်ကွန်ပျူတာပေါ်၌အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ကိုမေ့သွားပြီးစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်မက်သည့်“ အစွဲ” အတွင်းရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေပါကဤစနစ်သည်သင့်ကိုကူညီကောင်းကူညီလိမ့်မည်။ ။ ငါအကြိုက်ဆုံးအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုစာအုပ်ကနေအစွန်အဖျားအပေါ်အခြေခံပြီး: မနက်ဖြန်ဒါဟာလုပ်ပါ မာကု Forster ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ကွန်ပျူတာဖွင့်မီ, အသေးမှပေါ်တွင်သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှကိုရေးသား Post-ကြောင့်မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်၏ထိပ်မှသူတို့ကိုကပ်ထားပါ။ သငျသညျအသီးအသီးအလုပ်အကိုင်လုပျဆောငျအမျှသူတို့ကို unpeel နှင့်အခြားမျက်နှာပြင်မှသူတို့အပေါ်မှာကပ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏အလုပ်အမှုကိုပြုရပေမယ့်သင်ကလည်းသင့်ရဲ့စာရင်းလျော့မြင်နေများ၏စိတ်ကျေနပ်မှုရကြဘူးမသာ။ သို့သျောလညျးသငျသညျနေဆဲသငျသညျကိုပြည့်စုံစေရာ၏တဲ့အမြင်အာရုံစံချိန်ရှိသည်။
ငါကအလွန်လှုံ့ဆျောရှာပြီးကိုယ်ကအသုံးပြုတဲ့အခါအရမ်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းနှင့်အပြုသဘောဖြစ်၏။ အဆိုပါဆက်ပြောသည်အကျိုးအတွက်ငါ porn ဆိုဒ်များအခြိနျမဆှဲနှင့်စောင့်ကြည့်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်မှာလာသောအခါ essentials ရန်သင့်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်အရာ Juggle:
ငါအခုထိအတော်လေးထိရောက်သောဖြစ်ဟန်အရာသစ်တစ်ခုချဉ်းကပ်မှုရှိသည်။ ကျွန်မအင်တာနက်ကိုဖယ်ရှားပစ်တယ်။ yeah ငါပိတ်ထားနိုင်မဆို filter ကိုငါ့ထံသို့အများကြီးတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူး, ငါတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမဆိုစကားဝှက်တွေပေးမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အဘယျသို့ပွုဘူးငါ DSL Modem ကိုများအတွက် power supply ကို ယူ. လုပ်ကိုင်ဖို့ငါနှင့်အတူအထဲတွင်ဆောင် ခဲ့. , ငါ 1 တစ်လစဉ်းစားတယ်အဆိုပါကာလတွင် future- များအတွက်အံဆွဲထဲမှာကျန်ရစ်တော့သည်။
ငါစမတ်ဖုန်းရရှိပါသည်နဲ့ကျွန်မအီးမေးလ်များကိုပေးပို့သို့မဟုတ် Google အပေါ်တစ်ခုခုတက်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငါ, ငါ၏ MacBook မှလံကြိုးကို set up နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူက porn များအတွက်အသုံးပြုလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်မဟုတ်ဘူး, ငါ့အဓိက PC ကိုပင်မဟုတ်ပါ ကြောင်းချိတ်ဆက်ထား။ အဆိုပါ PC ကိုနေဆဲအရေးအသားသို့မဟုတ်ဂီတလုပ်နေတာများအတွက်ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်တယ်နေချိန်မှာဒါဟာအစ, reddit သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဂိမ်းကဲ့သို့အခြားအချိန်-ပိန်က်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ကြပါဘူးတဲ့ဖော်ရွေဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ဒီတော့ဝေး, ကကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ porn ကြောင့်ဝေးနေတဲ့ကလစ်မရင့်ယခုအများကြီးလျော့နည်းသွေးဆောင်ပါပဲ။ ငါမရှိတော့စဉ်မှာကြောင်းအထူးသဖြင့် dopamine အလုအယက်ဆန့်ကျင်ကသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်တာတဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားစရာအခြားလှုပ်ရှားမှုများအများကြီးပိုပြီးနှစ်သက်ဖွယ်ပုံရသည်။
ငါသည်ဤကဲ့သို့အဆို "ဆိုးဝါးပြင်းထန်လွန်းသော" အတိုင်းအတာလုပ်နေတာခုခံချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်ထဲမှာဒါသိသာပုံရသည်။ အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်များနှင့်ရှေ့ဆက်စီစဉ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူပြောင်းလဲလူသားများအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုထင်လို။ သို့သော်စွဲမှအရှုံးပေးသောစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး, အစားကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို bypass လုပ်လျက်, ပိုပြီး primal အများကြီးဟောင်းများကိုတစ်ဦးနှောက် circuitry ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်သင်က၎င်းကိုအမှန်တကယ်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့ဥပမာခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ဆက်ဆံရန်သာလိုသည်။ အကယ်၍ ခွေးသည်သင်၏ဖိနပ်ကို ဆက်၍ စားနေမည်ဆိုပါကသင်ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်ပျက်စီးသွားသောဖိနပ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်သွားရန်အထောက်အကူမဟုတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဖိနပ်ကိုဖျက်ဆီးတာဟာမကောင်းဘူးလို့ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သင့်တယ်။ သင်ကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဖိနပ်ကို ၀ င်ခွင့်မရအောင်သေချာအောင်လုပ်ရမယ်။ ဝေးဝေးအံဆွဲထဲမှာပုန်းနေသလိုမျိုး၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလိုထပ်တူထပ်ခါတလဲလဲကြုံခဲ့ရသူတွေကိုဒီနည်းဗျူဟာကိုကြိုးစားကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ သင်တစ် ဦး တည်းနေထိုင်မည်ဆိုလျှင် modem သို့မဟုတ်၎င်း၏ power supply ကိုအလုပ်ထဲသို့သာယူပြီးထိုတွင်ထားခဲ့ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုမျှဝေသောမိသားစုသို့မဟုတ်အခန်းဖော်များနှင့်အတူနေပါက PMO ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်အသုံးပြုသောကွန်ပျူတာအတွက်ကတ်ကြေးတစ်စုံဖြင့် Ethernet cable ကိုဖြတ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ သင်ပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ထိုမျှလောက်ကုန်လွန်သွားသောအခါသင်ဆိုင်အသစ်တစ်ခုကိုသင်ဝယ်နိုင်သည်။
ငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဘေးဥပဒ်လိုရှောင်ရှားနေတယ်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေသောအချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒီဂရီကိုပြီးမြောက်ရန်အွန်လိုင်းအက္ခရာသင်္ချာအတန်းအစားကိုလက်ရှိတွင်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်္ချာဘာသာရပ်ကိုသွားမယ့်အချိန်မှာငါ့ကွန်ပျူတာရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဖြစ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါ့လက်ပ်တော့ပါတဲ့ Starbucks မှာငါမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာငါစိတ်ထဲထွင်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုလျင်မြန်စွာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် (သို့) ကျွန်ုပ်၏အိမ်ကွန်ပျူတာမှကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သောအရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုကိုအချိန်ဗုံးတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ငါမြန်မြန်မြန်ပြီးအရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှပြီးအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ PMO ဟာဘယ်လောက်ခိုးကြောင်ခိုးယောင်သိလို့ငါဟာအခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြေးနေတာပါ
ငါ PMO သန့်ရှင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူစစ်တိုက်ဒီလမ်းလွယ်ကူသည်ထင်ပါတယ်။ PMO ကိုရှောင်ရှားရန်စဉ်းစားမည့်အစားအိမ်သုံးကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိရုံးခန်းများကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းများကိုသာစဉ်းစားနေသည်။ သူတို့ကလိုပဲပန်းရောင်ဆင်ကိုမစဉ်းစားရန်သင့်အားပြောလျှင်သင်တို့၏စိတ်သည်မကူညီနိုင်ပါ။ ပန်းရောင်ဆင်ကိုပုံဖော်ရန် ကွန်ပြူတာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရှောင်ရှားပြီးတဲ့နောက် PMO ဟာငါ့ရဲ့အခြား abstinence ကိုကြိုးစားစဉ်ကပန်းရောင်ဆင်မဟုတ်တော့ဘူး။ ကွန်ပျူတာအချိန်ကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ပန်းတိုင်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်နောက်အချက်မှာကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားတွေ၊ မင်းကိုပြောခွင့်ပြုပါ၊ ဒါကမင်းရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုတယ်။ ငါ status update များ, ဓာတ်ပုံများ (အစပျိုးနိုင်သောမိန်းကလေးများ၏), ငါ့ status ကို update ကိုသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုအပေါ်မှတ်ချက်များကိုကြည့်ဖို့ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ အခြေခံအားဖြင့်ငါ့ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့အာရုံစိုက်မှုအားလုံးဟာတစ်နေရာရာသို့သွားသည်။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည် K9 ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ (အထူးသဖြင့်ပိတ်ထားသောကျွန်ုပ်၏ go-to sites များ၏စာရင်းရှည်ပါ ၀ င်သည်) ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကန့်သတ်ချက်များကိုလည်းသတ်မှတ်ထားသဖြင့်ည ၉ နာရီနောက်ပိုင်းအင်တာနက်ကိုမကြည့်နိုင်တော့ပါ။ ကောင်းပါတယ် အဘယ်သူမျှမပျင်းရိနှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့် surfing ။ အစပျိုးမှုအပေါ်ထိမိလဲစရာအလားအလာနည်းသည်။ relapse ဖို့သွေးဆောင်မှုလျော့နည်း။ K9 admin စာမျက်နှာတွင် "Time Restrictions" ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှထိပ်ဆုံးမှဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ Time Restrictions အတွင်းတွင်သင်အင်တာနက် ၀ င်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ခြင်းကိုရွေးချယ်ရန်“ စိတ်ကြိုက်” ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလုပ်အပြီးတွင်ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားရန်နှင့်ပုံမှန်နာရီတွင်အိပ်ရာဝင်ရန်သတိပေးသည်။